ကိုယ့်ကလေးကို အိမ်မှာ ဘယ်လို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးမလဲ - Cuddle Me to Read
မိဘတော်တော်များများဟာ အိမ်မှာ ကိုယ့်ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးချင် ကြပါတယ်။ ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ ကျူရှင်ပို့တဲ့ မိဘတွေတောင်မှပဲ အိမ်မှာတတ်နိုင်သရွေ့ သင်ပေးချင် ကြပါတယ်။​ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတာ မိဘတော်တော်များများက မသိကြပါဘူး။ အောက်မှာ မိမိကလေးကို အသက် အပိုင်းအခြားအလိုက် ဘယ်လို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးရမလဲဆိုတာ အကြံပြု ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ စသင်ချင်တယ်၊ ဘယ်ကဘယ်လို စရမှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်
မိဘတော်တော်များများက အိမ်မှာကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ စသင်ပေးချင် ပေမယ့် ဘယ်ကစရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အချို့ကလဲ ကိုယ့်အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံက အကောင်း ကြီးမဟုတ်တော့ မစရဲတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ စသင်ဖို့ဆိုတာ မိဘလုပ်သူက အင်္ဂလိပ်စာ အရမ်းကောင်းနေစရာ မလိုပါဘူး။ အဓိက အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်က မိဘလုပ်သူက ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ တတ်အောင် သင်ပေးလိုတဲ့ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ရယ်၊ နောက်ပြီး ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ချင်လာအောင် အားပေးအားမြှောက် လုပ်ပေးဖို့နဲ့ ကလေးက အင်္ဂလိပ် စာလုံးလေးတွေ တတ်လာတဲ့ အခါမှာ ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးက ချက်ချင်း အင်္ဂလိပ်လို စပြီး မပြောလို့ ဘာမှစိုးရိမ်စရာ၊ အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကလေးတွေ အင်္ဂလိပ်လို စပြောဖို့ဆိုတာ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ မိဘက စိတ်မပျက်ပဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သင်ကြားပေးမယ်ဆိုရင် သိပ်မကြာမီ ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာ ကလေးက အင်္ဂလိပ်လို စပြောလာပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန် အချိန်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုထားပြီး ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးပါ
ကလေးကို အိမ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တာကို ပုံမှန် အချိန်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုထားပြီး (အချိန်ဇယားဆွဲပြီး) သင်ကြားပေးပါ။ တစ်ကြိမ်ကို အချိန်အကြာကြီး သင်တာထက် အချိန်တိုတို နဲ့ ခွဲသင်တာက ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။ စသင်စမှာ ကလေးငယ်တွေဆို ၁၅ မိနစ်လောက်ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုကြာရင် ကလေးက စိတ်ဝင်စား အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်း လျှော့နည်းသွားပါမယ် ကလေးကြီးရင်တော့ အချိန်နည်းနည်း ပိုယူနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ချိန်ကို အချိန်တစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး သင်ပေးပါ။ စာသင်တဲ့အခါ သင်ခန်းစာတွေကို ကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားမယ့် သင်ခန်းစာမျိုးတွေ ရွေးချယ်ပေးပြီး တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ မရိုးအောင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ပြီး သင်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါ သင်ခန်းစာ အမျိုးတူတာတွေကို နေ့စဉ်အချိန်မှန် သင်ပေးပါ။ ဥပမာ ကျောင်းကပြန်လာရင် အင်္ဂလိပ်စာ ကစားနည်းတွေ ကစားတယ်ဆို နေ့စဉ်ဒီအချိန်ရောက်ရင် အင်္ဂလိပ်စာ ကစားနည်းကိုပဲ ကစားပါ။ ညအိပ်ရာ မဝင်မီ အင်္ဂလိပ် ပုံပြင်ဖတ်တယ်ဆိုရင် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင် ပုံပြင်ပဲ ဖတ်ပါ။ အကယ်လို့ သင့်အိမ်မှာ နေရာရှိမယ်ဆိုရင် နေရာတစ်နေရာကို English Corner အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပါ။ ဒီနေရာမှာ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေ၊ ပိုစတာတွေ၊ DVD တွေနဲ့ သင့်ကလေး အင်္ဂလိပ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ထားရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရာမှာ ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့ကျင့်မှုဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးတွေ အနေနဲ့ စကားလုံးတွေကို အကြိမ်ကြိမ် ကြားဖူးဖို့ လိုအပ်သလို အက္ခရာတွေနဲ့ စကားလုံးတွေကိုလဲ အကြိမ်ကြိမ် မြင်ဖူးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးကို သင်ရာမှာ စကားလုံးတွေကို အကြိမ်ကြိမ် ပြောပြပါ။ အက္ခရာတွေကိုလဲ အကြိမ်ကြိမ် ပြပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သင်ကြားပေးပါ။
ကစားနည်းတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးပါ
ကလေးတွေရဲ့ စိတ်အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းက အရမ်းတိုတောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးကို စိတ်ဝင်စားအောင် ကစားနည်းလေးတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းမနေသေးတဲ့ ကလေးတွေဆို ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးနိုင်တဲ့ ကစားနည်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ နောက်ဆောင်းပါးတွေမှာ ဒီကစားနည်းတွေကို အသေးစိတ် ရေးသားတင်ပြ သွားပါ့မယ်။ အလွယ်ဆုံး ကစားနည်းတွေကတော့ Flash Card ကတ်ပြားလေးတွေ သုံးပြီး ကစားတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ကစားနည်းတွေကတော့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ကစားရတဲ့ ကစားနည်းတွေ၊ board games တွေ၊ စာလုံးတွေနဲ့ ကစားရတဲ့ word games တွေနဲ့ online games တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်ကြုံတွေနေရတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အသုံးချပြီး သင်ပေးပါ
အိမ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တာရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ၊ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အသုံးချပြီး သင်ကြားပေးနိင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အိမ်မှာရှိတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ပြပြီး ဒါက တီရှပ် အပြာရောင်လေး (Blue T-shirt)၊ ဒါက ခြေအိပ် (socks) အစရှိသဖြင့် သင်ပေးလို့ ရပါတယ်။ အိမ်က ပရိဘောဂတွေ ပြပြီး Table, chair, stool အစရှိသဖြင့် သင်ပေးပါ။ ကလေးကို ရေချိုးပေးတဲ့အခါ takingashower ဆိုပြီး သင်ပေးပါ။ ကလေးကိုလဲ လိုက်ဆို ခိုင်းပါ။ အမေက ပန်းကန်ဆေးနေတုန်းဆို Mommy is washing dishes ဆိုပြီး ကလေးကို သင်ပေးပါ။ What is mommy doing? ဆိုပြီး ကလေးကို ပြန်မေးပြီး Mommy is washing ဆိုပြီး ပြန်ဆိုခိုင်းပါ။ ကလေး အစာကျွေးတဲ့ အချိန်ဆို apple, orange, carrot, water, rice အစရှိသဖြင့် ကလေးစားတာတွေကို ပြပြီး သင်ပေးပါ။
ကလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ပုံပြင်တွေ ပြောပြ၊ ဖတ်ပြတာဟာ ကလေးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေဟာ အရောင်စုံတဲ့ ရုပ်ပုံတွေပါတဲ့ စာအုပ်တွေကို နှစ်သက်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲက ပုံတွေကို ထောက်ပြပြီး ကလေးကို အခေါ်အဝေါ် စကားလုံးတွေ သင်ပေးပါ။ ကလေးကို လိုက်ဆိုခိုင်းပါ။ ပြီးရင် စကားလုံးတွေ ရွတ်ပြပြီး ပုံကိုထောက်ခိုင်းပါ။ ဥပမာ where’s the cat? ဆိုပြီး ကြောင်ပုံရှာခိုင်းပါ။ ပြီးရင် ပုံပြင်တွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ပြပါ။ မြန်မာမပြန်ပါနဲ့။ ကလေးနားလည်မယ့် အလွယ်ဆုံးက စပြီး တဖြည်းဖြည်း အဆင့်မြှင့်ပြီး ဖတ်သွားရင် ကလေးက နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ပုံပြင်စာအုပ်တွေ ကလေးကို ဖတ်ပြတာဟာ ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ စကားလုံးတွေရဲ အသံထွက်တွေနဲ့ ရင်နှီးကျွမ်းဝင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးကဗျာလေးတွေ၊ ကလေးသီချင်းတွေ အဆိုသင်ပေးပါ
ကလေးတွေဟာ သီချင်းဆိုရတာ ဝါသနာ ပါကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးကဗျာလေးတွေ၊ သားချော့သီချင်း (Nursery rhymes) တွေကို အထူးပဲ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သီချင်းတွေကို သီဆိုတာဟာ စကားလုံး အသစ်တွေကို ကလေးက နားလည်စေပြီး အသံထွက် တွေကိုလဲ ကျွမ်းကျင်လာစေပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှု (Action) တွေပါတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေဆို ကလေးက သီချင်းဆိုရင် သူနဲ့ တွဲဖက်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်တဲ့ အတွက် ကလေးက စိတ်ဝင်စားသလို အင်္ဂလိပ် စာလုံးတွေကိုလဲ ပိုပြီး မှတ်မိစေပါတယ်။
ကလေးတွေကို အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါ (Grammer) သင်ကြားနည်း
ကလေးငယ်တွေကို အင်္ဂလိပ် grammer စည်းမျဉ်းတွေ သင်ပေးလို့ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ကလေးက မှတ်မိနိုင်စွမ်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒီအစား ကလေးကို မိဘလုပ်သူက အင်္ဂလိပ်လို ပြောတဲ့ အခါ grammer မှန်မှန်နဲ့ ပြောချင်းအားဖြင့် ကလေးကို သဒ္ဒာစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ အကြွမ်းတဝင် ရှိစေပါတယ်။ ဥပမာ မနက်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုအကြောင်း ပြောတယ်ဆို Past tense နဲ့ ပြောတာမျိုးပေါ့။ ကလေးကြီးဆိုရင်တော့ Grammer သင်ခန်းစာတွေ စသင်လို့ ရပါပြီး။ ကလေးကို Grammer သင်တာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ နောက်ဆောင်းပါးတွေမှာ အသေးစိတ် ရေးပါဦးမယ်။
ဘယ်စကားလုံးတွေ အရင်ဆုံး စသင်မလဲ
ကလေးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ် မူတည်ပြီး စသင်မယ့် စကားလုံးတွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာစိတ်ဝင်စားမှုပဲ ရှိရှိ ကလေးတိုင်းကို သင်ပေးသင့်တာကတော့
ဂဏာန်းတွေ (Number 1 – 10, 11 – 20, 20 – 100)
ပုံပန်းတွေ (circle, square, triangle, etc.)
နာမဝိသေသန တွေ (Adjectives): ဥပမာ big, small, tall, short, happy, sad, tired, အစရှိသဖြင့်
ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ (Body parts)
တိရစ္ဆာန်တွေ (Cat, dog, mouse rat, bird, fish etc)
အဓိက အရေးကြီးတာက ဒီအင်္ဂလိပ်စာ သင်ချိန် (English Time) ကာလအတွင်းမှာ ကလေးက အင်္ဂလိပ်လိုပဲ သုံးနှုံပြောဆိုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘလုပ်သူကလဲ ကလေးကို English Time ကာလအတွင်းမှာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ သုံးနှုံးပြောဆိုဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။